आउँदै छ नयाँ ई-कमर्श कम्पनी बिज बजार, आईपीओ पनि जारी गर्ने
आइतबार, ९ माघ, २०७८
कमल केसी आइतबार, २७ भदौ, २०७८
नेपालको अनलाइन बजार फराकिलो बन्दै गएको छ । एकपछि अर्को गर्दै कम्पनी थपिदै गएका छन् भने प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र छ ।
यही प्रतिस्पर्धाको बीचमा अर्को ई-कमर्श प्लेटफर्म आउँदै छ, बिज बजार । असोज १ गतेदेखि सुरु हुन लागेको बिज बजार पब्लिक कम्पनी हो, जसले निकट भविष्यमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने योजनासमेत बनाएको छ ।
१८ महिनाको तयारी पछि बिज बजार सुरु हुन लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज गौतमले बताए।
‘हाम्रो स्लोगन नै छ ‘जे चाहिन्छ, त्यो पाइन्छ’, गौतमले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘त्यसअनुसार ग्रोसरी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स, फेसन, ज्वेलरी लगायतका सबै सामानहरु पाइन्छन् ।’
कम्पनीले अहिले बेटा परीक्षण शुरू गरेको छ । कम्पनीले सुरूवातको अवसरमा भेन्डर र ग्राहकका लागि अफर ल्याएको छ । यस अफर अन्तर्गत भेन्डरलाई ३ महिना जिरो प्रतिशत कमिसन सुविधा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । साथै २४ घण्टा भित्रमा पेमेन्ट सेड्युल भइसक्ने छ । भेन्डर बन्नका लागि वेबसाइटमा गएर रजिष्ट्रेसन गर्न सकिने छ ।
त्यस्तै ग्राहकका लागि पनि विभिन्न ओपनिङ अफर ल्याउने लागेको गणेश बताउँछन् । कम्पनीले रिफरल अफर पनि ल्याउँदै छ । जसमा ५० रूपैयाँको रिफरल कुपन पाइने छ । त्यो कुपन सामान खरिद गर्दा प्रयोग गर्न सकिने छ । त्यस्तै ग्राहकले २५ प्रतिशत सम्म छुुट अफर ल्याउन लागेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीको वेबसाइट र मोबाइल एपबाट सामान खरिद गर्न सकिने छ । मोबाइल एप अहिले एप स्टोर र प्ले स्टोरमा रिभ्युको चरणमा रहेको छ ।
बिज बजारबाट सामान खरिद गर्दा खल्ती र कनेक्ट आईपीएसबाट पैसा तिर्न सकिने छ । अन्य पेमेन्ट गेटवे पनि जोड्ने कम्पनीको योजना रहेको छ । क्यास अन डेलिभरीको सुविधा समेत रहेको छ ।
७७ जिल्लामै सेवा
कम्पनीले ७७ वटै जिल्लामा सेवा दिने छ । त्यसका लागि सातै प्रदेशमा कार्यालय खोलिसकेको छ । बिज बजारबाट देशभरीले डेलिभरीको सुविधा पाइने उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यकामा ४८ घन्टाभित्रमा सामान डेलिभरी गर्ने र उपत्यका बाहिर ३ दिनभित्रमा डेलिभरी हुने कम्पनीले जनाएको छ । बिज बजारमा अथेन्टिक प्रडक्टमात्रै राख्ने दावी उनले गरे ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका ई-कमर्श कम्पनी सेवामुखीभन्दा पनि नाफामुखी भएकाले ग्राहकले विश्वास जित्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘बिज बजारमा सूचीकृत भएको प्रडक्टको अथेन्टिसिटी जाँच गर्छौं,’ उनले भने, ‘डिस्कृप्सन अनुसारको प्रडक्ट हो की होइन भनेर जाँच गर्ने हाम्रो छुट्टै टिम छ । अथेन्टिक प्रडक्ट हो भन्ने भएपछि मात्र हामी डिसप्याच गर्छौं ।’
रिटर्नको प्रक्रियालाई पनि सजिलो बनाएको उनले बताए । यदी सामान चित्त बुझेन भने अर्डरबाट नै रिटर्न प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ । ४८ घण्टादेखि ७२ घण्टाभित्र रिटर्न प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ । रिटर्न गरेको प्रडक्ट लिन कम्पनीको ग्राहकको घरमा जानेछ । कम्पनीले सातदिनको रिटर्न पोलीसी राखेको छ ।
३ वर्षमा आईपीओ
बिज बजार प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने योजना सहित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको छ । प्राथमिक शेयर (आईपीओ) ल्याउने उद्देश्य अनुरूप कम्पनी शुरूमै पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भएको उनी बताउँछन् ।
अबको ३ वर्षभित्रमा आईपीओ ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । ‘आईपीओ ल्याउने तयारी स्वरूप हामीले यसलाई शुरूमै पब्लिक कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ गौतम भन्छन् ।
२ वर्षमा १६ सयलाई रोजगारी
अहिले बिज बजारमा करिब ९० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । काठमाडौंको कार्यालयमा ५६ जना कार्यरत रहेका छन् भने प्रदेश कार्यालयमा जनघन्त्व हरेर २ देखि ६ जनासम्म कार्यरत छन् । आगामी २ वर्षभित्रमा करिब १६ सयलाई रोजगारी दिने योजना अनुसार कम्पनी अगाडि बढेको उनले सुनाए ।
५ जना प्रोग्रामरले इनहाउस बनाएको सफ्टवेयरबाट सुरु भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको डिजिटल यात्रा
एफवान सफ्ट : वेब होस्टिङदेखि फिनटेक लिडरसम्म ! १४ सहायक कम्पनी, १ हजार बढीलाई रोजगारी
मंगलबार, २७ पौष, २०७८
यसरी डिजिटल बन्दै छ नेपाल आयल निगम, पेपर वर्कलाई शुन्यमा झार्ने योजना
सोमबार, २९ कार्तिक, २०७८
कविता : पूरा होस् मेरो सपना - डिजिटल नेपालको !’
शुक्रबार, १९ कार्तिक, २०७८
द अर्बन स्पेस : स्मार्ट घरहरको लागी नयाँ ठेगाना
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ड्रोनको प्रयोग कसरी भैरहेको छ ?
Report: iPhone 15 Pro may Come With 5x Periscope Camera
ONEPLUS: OnePlus 10R tipped to launch in Q2 2022 with MediaTek Dimensity 9000
eSewa celebrates their 13th Anniversary, various offers on the line up
Cyber-attack on ICRC: Sophisticated cyber-attack targets Red Cross Red Crescent data on 500,000 people
WHATSAPP: WhatsApp may soon let you transfer your chats from Android to iOS